Akụkọ - Otu esi eme ihe ọfụma na -agbapụta mmiri mgbapụta mmiri na -agba mmiri
Otu esi eme ihe ọfụma na -agbapụta mmiri mgbapụta mmiri na -agba mmiri
Mgbe anyị na -eji mgbapụta peristaltic na -asọfe iji nyefee mmiri mmiri, anyị ga -achọpụta na mmiri dị na pipeline anaghị akwụsị ịgbaba ozugbo, ọ na -agbada nwayọ. Ọ bụghị na mgbapụta ahụ na -akwụsị ịtụgharị na mmiri mmiri na -akwụsị ịgbada n'echiche anyị, mana mmiri mmiri na -akwụsị ịgbasa mgbe mmiri na -asọba na ọkpọkọ. Ihe omume nke ihe a ka a na -akpọ ihe na -amịkpọ.
Ihe ndị na -akpata nsụpụta nke mgbapụta peristaltic eruba?
Nke a bụ ihe ọmụmụ mmiri nkịtị. Ihe kpatara ya bụ na mgbe mgbapụta mmiri ahụ na -ebufe mmiri mmiri, ọkpọkọ nke mgbapụta na -eche ihu ala ma nwee oke ike. Mgbe mgbapụta ahụ kwụsịrị ịtụgharị, mmiri mmiri ahụ ga -agbada nwayọ nwayọ n'ihi ductility ya na ike ndọda ya, ihe ga -esi na ya ga na -atasị n'ọnụ mmiri mmiri mmiri ruo mgbe mmiri mmiri dị na sọks ga -atachapụ kpamkpam. N'oge a, ụfọdụ mmadụ ga -eche na ebe ọ bụ na mmiri mmiri na -amịkọrọ ike ndọda, gịnị ka a ga -eme ma ọ bụrụ na ihe omume siphon apụta? N'ezie, echegbula. Ekwenyere m na onye ọ bụla maara ụkpụrụ ọrụ nke mgbapụta peristaltic. Mgbapụta ahụ na -adabere na rollers ka ọ na -afanye eriri mmiri (ntinye ahụ na -emepụta nrụgide na -adịghị mma yana ọpụpụ na -arụpụta ezigbo nrụgide), a na -ejikwa ọdịiche nrụgide maka nnyefe. Ọbụlagodi mgbe nkwụsị akwụsị, a na -afanye eriri akpa ahụ nke ukwuu, a na -akwụsịkwa ụzọ mbata na ọpụpụ iji zere ihe a.
Ngwọta maka ihe na -amị amị
Ekwuru m ihe kpatara mmiri mmiri ahụ ji asọba na mmiri. Otu n'ime ha bụ esemokwu na -agbanwe agbanwe nke sooks. Ihe kpatara mmiri mmiri ji agbapụ bụ na nhịahụ nke sooks dị obere karịa ductility na ike ndọda nke mmiri n'onwe ya. Ọ bụrụ na anyị gbasaa esemokwu a na -agbanwe agbanwe iji mee ka ọ dị ukwuu karịa ike na -agbada na mmiri mmiri, ọ ga -ezuru ịgbanwe ihe a.
1. A na -ebelata dayameta nke ọpụpụ mmiri mmiri, mmiri dị na tube na -adị obere, mana mgbatị ahụ anaghị agbanwe agbanwe, si otú a na -edozi nsogbu ahụ.
2. Mụbaa valvụ nrụgide wee debe valvụ nrụgide otu ụzọ na mpụta. A ga -emepe valvụ ahụ site na nrụgide nke mgbapụta n'onwe ya mgbe ọ na -arụ ọrụ, na valvụ ahụ ga -emechi mgbe ọ kwụsịrị.
Ekwesịrị ịmara na nsogbu nke ihe mkpali. Mgbe a na -eji mgbapụta na -ebufe mmiri mmiri, ihe mkpali ahụ ga -eme ka mmiri mmiri dị na pọmpụ mgbapụta peristaltic laghachi azụ ma mịghachi azụ. Ya mere, dayameta nke sooks kwesịrị ibu karịa ogologo nke mgbapụta na -azu azụ, ma ọ bụghị ya, ọ ga -abụ n'ihi esemokwu Ọ dịghị nmiri etolite.
Ihe dị n'elu bụ maka ihe omume na mgbochi nke ihe na -asọ asọ nke mgbapụta peristaltic na -asọ. Ọ bụrụ na ị ghọtabeghị ma ọ bụ rụọ ọrụ na-ezighi ezi, ị nwere ike rụtụ aka na Injin Injin mgbe irechara ahịa.
Oge ezipụ: Jun-08-2021